FMMA : mila tezaina amin’ny tsara ny vahoaka | Région Boeny
Ny harivan’ny 03 febroary 2015 no nampahafantatra ny mpanao gazety ny fisiany ny Fikambanan’i Mahajanga Miaro ny Ara-dalàna (F.M.M.A) tao amin’ny efitrano fivorian’ny Faritra Boeny Ampisikina Mahajanga.
Fikambanana tsy miankina amin’ny fanjakana na antoko pôlitika tarihin’Atoa Razafindehibe Etienne Hilaire izay ivondronan’ireo sokajin’olona samy hafa avy amin’ny Faritra efatra ao anatin’ny Faritan’i Mahajanga.
Anisan’ny iray amin’ireo filoha lefitra efatra Atoa Saïd Ahamad Jaffar, Lehiben’ny Faritra Boeny amin’izao fotoana. Ity farany dia nanamarika fa mila tezaina araka ny tokony ho izy ny vahoaka ka fomba maro no azo atao amin’izany mba hampitana ny hafatra toy ny fanaovana atrik’asa, fampisehoana mivelatra, ny fihaonana amin’ny mpanao gazety sy ny sehatra hafa ihany koa. Ny fampianarana ny tanora mba ho olom-banona no tena tanjona lehibe kendrena amin’izany hoy izy.
Ny Filohan’ny FMMA kosa nilaza mazava fa miaro ny ara-dalàna izy ireo satria fanjakana tan-dalàna no ilaina ankehitriny hampandroso an’i Madagasikara, izay efa eo an-tànan’ny Malagasy ankehitriny ka mila harovana.
Tsy mila fihoaram-pefy sy fanaovana gaboraraka fa fiaraha-monina hanjakan’ny rariny sy ny hitsiny kosa. Hamelo maso indray ny soatoavina malagasy izay efa very ankehitriny ka ireo mpikambana no hanatanteraka izany amin’ny alalan’ny trai-kefa sy ny fahaiza-manaon’ny tsirairay.
Marihana fa 60 no isan’ny mpikambana ankehitriny ka ny Sekretera jeneraly dia Atoa Rajerimanana Délormes Jacques; ny mpitam-bola kosa dia Atoa Heriniaina Tia Solofomanga. Nambaran’ny filoha lefitra Atoa Saïd Ahamad Jaffar fa afaka herinandro dia hanao « téléthon » ho voin-kava mahatratra ho an’ireo traboina tamin’ny fandalovan’ny Chedza ny fikambanana FMMA.